Voaràra Manerana An’i Rosia Izao Ny Bitsika ‘Charlie Hebdo’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2015 2:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, русский, Français, Ελληνικά, English
Charlie Hebdo miatrika fitsaràna. Sary nataon'i Kevin Rothrock.
Noraràn'ny fitsaràna monisipaly iray ao Chechnya ny kaonty Twitter an'ilay gazetiboky frantsay Charlie Hebdo. Tamin'ny 23 Novambra 2015 ilay didim-pitsaràna. Mifanaraka amin'ny lalàna federaly Rosiana, manankery manerana an'i Rosia ilay fandraràna.
Tao anatin'ny antsony ho an'ny fitsaràna, nanazava ny lehben'ny fampanoavana Chechen, Sharpuddi Abdul-Kadyrov, hoe nahita zavatra nanafintohina tao anatin'ny kaonty Twitter-n'ny Charlie Hebdo ny polisy tamin'ny 11 Novambra 2015. Nihanihany momba ilay fiaramanidina Rosiana mpitatitra mpandeha nidaraboka ka nahafaty ireo olona 224 rehetra tao anatiny tamin'ny 31 Oktobra tany Ejipta ilay votoaty. (Loza izay heverina ankehitriny ho vokatry ny fipoahana baomba.) Lazain'i Abdul-Kadyrov fa fanentanana ho amin'ny fankahalàna finoana sy foko ireo sary manadrohadro momba io resaka io, izay voaràra ho tsy araka ny lalàn'ny fanehoana hevitra ao Rosia.
Andraikitr'ilay masoivoho federaly mpanara-maso ny media amin'izao fotoana izao, Roskomnadzor, ny mampiditra ny kaonty Twitter-n'ny Charlie Hebdo ho ao anatin'ny lisitra maintin'ny aterineto eo amin'ny tany sy ny fanjakàna, izay mitaky amin'ireo mpanome tolotra aterineto mba hitroka izany indroa isanandro, raha Twitter kosa mandà ny hanàkana ilay kaonty ao Rosia.
Tsy mbola fantatra mazava hoe kaonty Twitter inona marina izany no nobahanan'ny manampahefana ao Rosia. Tsy namoaka na inona na inona ny kaonty Twitter ofisialin'ny Charlie Hebdo hatramin'ny 7 Janoary 2015, midika izany fa mety ho kaonty Chechen ilay noraràn'ny polisy noho ny nandefasany sariitatra momba ilay fidarabohanà fiaramanidina tany Ejipta, izay nitranga efa ho 11 volana taty aoriana. Hatreto aloha tamin'ity herinandro ity, tsy mbola nanampy kaonty Twitter tao anatin'ny lisitra maintin'ny RuNet ny Roskomnadzor, na nambara ho nandefa tatitra fanakatonana tany amin'ny Twitter.
Tantaran'ny Fanampenam-bava farany